Amazfit GTS 2e sy GTR 2e - Smartwatch $ 115 | TeraNews.net
Amazfit GTS 2e sy GTR 2e - smartwatches amin'ny $ 115
mpanoratra Kravetz Pavel Navoaka tamin'ny 28.12.2020
Ny orinasa Huami sinoa Huami dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fanombohana ny varotra famantaranandro marani-tsaina amin'ny andiany Amazfit GTS 2e sy GTR 2e. Ny vidin'ny gadget dia 115 $ any Sina. Raha jerena ny fiasa be sy ny fisehoana lafo dia lafo tokoa ny vidiny.
Amazfit GTS 2e sy GTR 2e - smartwatches
Efijery AMOLED, tahan'ny fo ary fanaraha-maso ny torimaso, ny fahatsapana ny saturation ny oxygen oxygen. Sarotra ny maka sary an-tsaina ny famantaranandro tsy misy fampiasa toy izany. Saingy ireo vokatra vaovao dia manana teknolojia vaovao - ny fahitana ny mari-pana. Ny thermometer namboarina dia irin'ny mpampiasa maro tokoa. Amazfit GTS 2e sy GTR 2e dia manana mpandray GPS sy modely Wi-Fi. Misy fiarovana amin'ny fisitrihana anaty rano vetivety (ATM 5). Fahaleovantenan'ny Amazfit GTS 2e - 14 andro, Amazfit GTR 2e - 24 andro.
Ho fanampin'ireo anjara asa takiana, ny fandaharan'asa smartwatches dia toa malaza be. Na lafo aza. Ny vatan'ny vy metaly sy ny tadiny azo soloina dia manampy amin'ny gadget Amazfit. Amin'ny endriny, ny GTR 2e dia manana tranga boribory (mitovy amin'ny famantaranandro Amazfit GTR 2)ary ny GTS 2e dia mahitsizoro.
Velomobile Twike 5 - fanafainganana hatramin'ny 200 km isan'ora
Ny fanomezana tsara indrindra ho an'ny bisikileta - BIKING WEST
Blog Light's set 3 in 1 Ring Light: topimaso
Hummer EV SUV - naseho ny prototype SUV elektrika
Messenger Signal - inona izany, endri-javatra
Huawei H6 WS8000 / 6 - nandray ny fampiroboroboana ny Mesh ny sinoa
Notebook VAIO SX12 dia milaza fa hifaninana amin'ny MacBook
ATV: inona izany, topimaso, izay tsara kokoa mividy